Maqaal: Xilalka “DF” Waxaa Lagu Qeybsaday 4.5 Canshuurtana Waxaa Laga Qaadayaa Muqdisho oo Kaliya!! – Shabakadda Amiirnuur
February 22, 2018 4:59 pm by admin Views: 467
Iyadoo Federalka la keenay Soomaaliya uu yahay mid u gogol xaaraya sidii dalka loo qeybin lahaa looguna kala dari lahaa labada dowladood ee cadawga ah ee Kenya iyo Itoobiya ayaa waxaa haddana dadka qaar laga dhaadhiciyay inuu yahay wax iska caadi ah oo horumar lagu gaarayo islamarkaana lagu qeybsanayo siyaasadda iyo dhaqaalaha, laakin waxaa meesha kasoo baxday (La Jiifiyaana Bannaan”
Shaqada ugu weyn ee ay beesha caalamku u dhiseen DF waa la dagaalanka waxa loogu yeero “argagixisada” oo ah mashruuc ay iyagu sameysteen balse aaney Soomaalidu shaqo ku lahayn.
Haddaba is weydii imisa lacag oo is dhaafi lahayd ayaa halkaasi ku baaqanaysa nin ajnabi ah oo imanaya dartii? Imisa maqaayadood oo aroortii xoolo qalay, oo quraac kariyay ayuu raashinku ku baarayaa markii wadada la xiro kuwaasoo haddana canshuur laga rabo!
Muddo dhowr jeer ah waxaa jidka Maka Al-mukarama ku umulay gabdho Soomaaliyeed oo Xamar ku dhashay kadib markii askari shisheeye uu celiyay gaarigii Isbitalka u waday? gabdhahaasoo haddana canshuur laga doonayo!
Ciidamada dowladda waxaa Muqdisho gudaheeda u yaalla isbaarooyin sida ay shirkoodii jaraa’id ku xaqiijiyeen ganacsatada gobolka Banaadir. Haddaba aqristow halkee caalamka ka jirtaa in bulshada hal magaalo la canshuuro kadibna lasii isbaareysto?
Muqdisho waxaa caadi ka ah in xilli saq dhexe ah ay guryahaaga usoo daataan ciidamo afka u duuban yahay oo ay ajaanib kamid yihiin kuwaasoo iyagoo tooshashash wata dul yimaada sariirtaada kadibna qalqal galiya qoska oo dhan, kuwaasoo waliba kusii sawiranaya adiga, xaaskaaga iyo caruurtaada oo aanan diyaarsanayn! Waa lacagtii aad bixisay oo laguugu qalqal galinayo!
Ardaygaas waxaa ka baaqday iskuulkii ama jaamacaddii. Aqoonyahankaas waxaa ka baaqday khudbado uu jeedin lahaa iyo shaqooyin uu qaban lahaa. Ganacsadahaas waxaa ka lumay waqti uu ku sameyn lahaa lacag uu nolosha qoyskiisa ku maareeyo. Waxa sidaasi loogu galayna waa canshuurtii laga qaaday iyadoo haddana mid dheeraad ah laga doonayo!
Cadaad darrada garsoorka.
Waxay ahayd in ay dowladdu maamusho dekedda laakin waxay sheegtay inaaney kartidaasi lahayn. Sidaa darteed su’aashu waxay tahay sidee dal dhan u maamuli kartaa dowlad maamuli weysay hal deked?
Marka aan xalka tilmaamayo sida siyaasiyiinta qaar, masoo xiganayo Mark Twain, Nelson Mandela iyo DN Chin. Balse waxaan soo xiganayaa Aayaad oo mowduucan quseeneysa iyo hal Xadiith oo ka sugan nabigeena Muxamad Naxariis iyo Nabad galyo korkiisa ha ahaato’e.
Aayaddan wuxuu Allaah inoogu soo gudbiyay goodi adag, haddii aabayaasheen, caruurteena, walaalaheen, xaasaskeena, qaraabadeena, maal aan kasbannay, ganacsi aan ka baqayno inuu baaro iyo guryo aan ka raali nahay, aan ka jeclaano Allaah, Rasuulkiisa iyo Jihaad Jidka Alle. Wuxuu inoogu goodiyay sidan: ” Suga inta Allaah ka keenayo amarkiisa, Allaah ma hanuuniyo qoomka faasiqiinta ah”
قال تعالى : أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
Maqaalkan wuxuu u gaar yahay qoraagiisa loomana tiirin karo Amiirnuur.com